Samachar Batika || News from Nepal » १२ वर्षअघि नै कोरोना भा’इरसबारे भविष्यवाणी गरीएको कितावमा अब यसको अन्त्यको बारेमा के लेखिएको छ ?
१२ वर्षअघि नै कोरोना भा’इरसबारे भविष्यवाणी गरीएको कितावमा अब यसको अन्त्यको बारेमा के लेखिएको छ ?
एजेन्सी- हाल विश्व कोरोना भा’इरस वि’रुद्धको ल*डाइँ ल*डिरहेको छ । अहिले विश्वमा कोरोनाको भ’यावह अवस्था आए पनि यस विषयमा १२ वर्ष अघि नै यस्तो स्थितिको सामना गर्नुपर्ने एक महिलाले भविष्यवाणी गरेकी थिइन् ।
कोरोना भा’इरसबारे १२ वर्ष अघि गरिएको भविष्यवाणी अहिले आएर सत्य सावित भएको छ । सन् २०१२ मा प्रकाशित ‘इन्ड अफ डेज’ पुस्तकमा निमोनिया जस्तै ख’तरनाक रोग सन् २०२० मा फैलने भनिएको थियो ।
पुस्तकमा फोक्सोमा असर गर्ने र निमोनिया जस्तै रोगको सं’क्रमण फैलन भनिएको थियो । यस्तो भविष्यवाणी गरिएको पुस्तक लेख्ने लेखिका हुन्- सिल्भिया ब्राउनी ।
भविष्यवाणी गरिएको पुस्तक प्रकाशित भएको अर्को वर्ष नै ब्राउनीको ७७ वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो । उनी आफूले गरेका भविष्यवाणी पुस्तकमा लेख्ने गर्थिन् । आफूले गरेका भविष्यवाणीले कतिपय आ’परधिक घ’टनामा प्रहरीलाई सहयोग गरेको समेत उनी दाबी गर्थिन् ।
आफूमा अलौकिक शक्ति भएको दाबी गर्ने उनले कतिपय घ’टनामा हराएका मानिस कहाँ छन् भनेर समेत भविष्यवाणि गर्थिन । भविष्यवाणी गर्ने ब्राउनीले ४० पुस्तकहरु प्रकाशित गरेको पाइएको छ ।
इन्ज अफ डेजमा नै उनले सन् २०२० मा निमोनिया जस्तै रोग फैलन लेखेकी थिइन् ।
जसमध्ये भविष्यको बारेमा बढी उल्लेख थियो र बढी विक्री भएकामध्ये पर्दथे । उनका पुस्तकमध्ये सिक्रेट्स एन्ड मिस्ट्रिज अफ दी वल्र्ड, इफ यु कुड सी ह्वाट आई सी, इन्साइट र इन्ड अफ डेज बढी विक्री भएकामा पर्छन् । इन्ज अफ डेजमा नै उनले सन् २०२० मा निमोनिया जस्तै रोग फैलन लेखेकी थिइन् ।
१९ अक्टोबर सन् १९३६ मा सिल्भिया सुमेकरका रुपमा अमेरिकाको क्यालिफोर्निमा जन्मिएकी सिल्भिया ब्राउनी तीन वर्षकै उमेरमा अलौकिक शक्तिकी थिइन् । सिल्भिया ब्राउनीको पुस्तकले कोरोना भा’इरस कसरी फैलन्छ र परिणाम के हुन्छ भन्ने समेतको भविष्यवाणी गरेकी थिइन ।
पुस्तकले यो रोग जति छिटो आयो उति छिटो नै हराउने भविष्णवाणी गरेको छ । रोगले केहीवर्षपछि आ’क्रमण फेरि गर्न सक्ने तर, पूर्ण रुपमा हराउने भनेको छ
प्रकाशित मिति १० बैशाख २०७७, बुधबार ०४:०१